Waa maxay on imtixaanka GED® ah? | USAHello | USAHello
Waa maxay on imtixaanka GED® ah? Habka ugu fiican ee si aad isugu diyaariso imtixaanka waa in la ogaado waa waxa imtixaanka GED® ah. Halkan waxaa ku qoran warbixin aad u baahan tahay inaad ka ogaato waxa ku saabsan imtixaanka GED® ah.
Waa maxay on imtixaanka GED® ah? Tani waa waxa aad filan karto:
Waxaad xarunta imtixaanka a tegi doonaa in ay qaataan imtixaanka GED® ah.
Waxaad ma qaadan karaan imtixaanka GED® online.
Waxaad qaadan doontaa imtixaanka on computer ah.
Waxaad qaadan kartaa imtixaanka ee Ingiriisi ama Isbaanish.
Baaritaanku wuxuu leeyahay 4 qaybo ka mid, mid ka mid ah meel kasta content (maado).
imtixaanka oo dhan qaadataa inta u dhaxaysa 7 iyo 8 saacadood, laakiin waxaad qaadan kartaa 4 qaybo maalmo kala duwan muddo 2-sano. Tani waa wanaagsan yahay, waayo, shaqaalaha iyo waalidiinta mashquul. Waxaa loola jeedaa waxaad dooran kartaa inaad wax ka barato for qayb kasta ee imtixaanka ilaa 8 bilood, qayb ka mid ah ka dib markii kale ee. Ama waxaad ka qaadan kartaa qaybaha aad ogtahay, ka dibna ay isticmaalaan waqti aad wax ka barato, waayo meelaha ugu adag.
Waa maxay on imtixaanka GED® ah? imtixaanka GED® waxay leedahay noocyo kala duwan oo su'aalo. Inay ku aflaxaan imtixaanka, aad u leedahay in la siiyo jawaabta saxda ah inta badan su'aalaha.
Inta badan su'aalaha ku saabsan baaritaanka noqon doonaa su'aalo doorashooyin badan. A su'aal doorashooyin badan ku siinayaa doorashada ka mid ah jawaabaha. Su'aasha laga yaabo in ay ku saabsan qoraalka, ama waxay noqon kartaa oo ku saabsan sawir ama map. Waxaa laga yaabaa inay jaantuska a, oo ay ku jiraan shaxda ah, miis, ama garaaf. Hoos waxaa ku qoran qoraalka ama image noqon doonaa su'aal ka dibna liiska jawaabo, sidan oo kale. Waxaad dooran xaq ka mid ah adigoo gujinaya goobaabin.
Waxa ugu fiican oo ku saabsan su'aalo doorashooyin badan waa in jawaabtu tahay had iyo jeer waxaa idinka soo hor jeedda. Waa inaad u ogaado taas oo ka mid ah waa. Si arrintan loo sameeyo, aad u baahan tahay si ay u eegaan si taxadar leh macluumaadka lagu siiyo. aad si taxadir leh u akhri su'aasha, aad. Waxaa laga yaabaa in aad trick waxoogaa yar - tusaale ahaan, waxaa la odhan karaa, Taas oo jawaab run ma aha?
Noocyada kale ee su'aalaha
imtixaanka GED® waxay leedahay qaabab kale dhowr su'aal. Waxay yihiin:
Isku day inaad soo baxay oo dhan noocaan su'aal GED® Waad arki doontaa imtixaanka. awoodin in ay buuxiso dhammaan noocyada su'aasha Waxaad noqon doontaa haddii waqti hore aad ku dhaqmaan!
imtixaanka GED® waxaa ka mid ah “jawaab la dheereeyey” su'aasha farshaxanka luqadda (akhriska iyo qoraalka) qaybta. Waxaad haysan doontaa in ay qoraan maqaalka ah oo adiga kugu saabsan mawduuc waxaa la siiyaa. Waxa ay noqon doontaa Qormada kooban ee 4 in 7 cutubyada (qormo ka dhigan in ka badan hal xukun).
tijaabiyeyaal waxay doonayaan in ay arkaan in aad fahmi karto macluumaad, horumariyo fikrad ama opinion, tusaalooyin, oo si cad u qor oo ku saabsan fikirkaaga. Waxay sidoo kale doonayaa in aan arko in aad si sax ah u qori kartaa Ingiriisi iyo sida loo isticmaalo kombiyuutarka aad ku soo bandhigto qoraal.
Waxaa jira 4 meelaha content (maadooyinka) imtixaanka GED® ah: cilmiga bulshada, sayniska, xisaabta (xisaabta gaaban), iyo fanka luqadda (akhriska iyo qoraalka).
Waa maxay on imtixaanka GED® ah: farshaxanka Luuqadda (akhriska iyo qoraalka)
The fananka af GED® (akhriska iyo qoraalka) cabbiraa sida ay sidoo kale in aad fahanto waxa aad ka akhrisan, haddii aad si sax ah u qori kartaa, iyo sida ugu wanaagsan ee aad ku sheegi kartaa fikradaha aad.
Imtixaanka Farshaxanka Luuqadda GED® waa 150 daqiiqo dheer, oo ay ku jiraan fasax 10-daqiiqo ah. Wuxuu leeyahay saddex qaybood:
Reading - 60 daqiiqo
Qoraalka (afka) - 35 daqiiqo
Qoraalka (Qormada) - 45 daqiiqo
Qaybta akhriska ee imtixaanka tijaabin doonaa awoodda aad u leedahay in la fahmo oo ka jawaabaan su'aalo ka goosin ka mid ah qoraalka. qoraalka waxaa laga yaabaa in ka hadalka ah, warqad, article wargeyska a, ama maris ah ka soo buug. qorniinkii (afka) qayb ka mid ah imtixaanka ku weydiin doonaa su'aalo ku saabsan siyaabaha saxda ah ee qoraalka. Waxaa tijaabin doonaa fahamka naxwaha. The laba qaybood marka hore adeegsataa kala doorashada badan, iyo noocyada kale su'aal fudud. Qaybta saddexaad waxay u baahan tahay in aad ku qortaa maqaalka ah.
Uma baahnid in aad in aad ogaato wax xaqiiqooyinka noqotay imtixaanka Fananka Af. Waxaad u baahan tahay si ay u muujiyaan in aad fahanto waxa aad akhrineyso by jawaabaya su'aalaha, iyo in aad ku qori kartaa Ingiriisi saxda ah. Waxaad baran kartaa badan oo ku saabsan imtixaanka Fananka Af.
Waa maxay on imtixaanka GED® ah: cilmiga bulshada
The imtixaanka cilmiga bulshada GED® cabiraya fahankaaga taariikhda, dhaqaalaha iyo juqraafiga ee Maraykanka, iyo arrimaha dunida ka mid ah oo aad u.
tijaabiyeyaal The raadinayso qaar ka mid ah aqoonta aasaasiga ah ee Maraykanka iyo dhaqaalaha dunida iyo juqraafiga. Baaritaanku wuxuu cabbirayaa awoodda aad si ay u fahmaan oo tarjumaan macluumaad dheeraad ah oo ka badan waxa ay qiyaastaa aqoonta xaqiiqooyin.
The imtixaanka cilmiga bulshada GED® socdaa 70 daqiiqo. Waxa uu isticmaalaa dhawr nooc oo kala duwan oo su'aal, oo ay ku jiraan doorashada badan, jiididda iyo dhibic, kaalinta kulul, iyo buuxi-in-the-bannaan. Su'aalaha ku saabsan cilmiga bulshada iyo dawladda waa (50%), taariikhda United States (20%), dhaqaalaha (15%), iyo dhulka iyo dunida (15%). Waxaad baran kartaa badan oo ku saabsan imtixaanka cilmiga bulshada.
Waa maxay on imtixaanka GED® ah: xisaabta
Imtixaanka xisaabta GED® cabbiri doonaa fahamka dhowr nooc oo ah xisaabta. Waxaa ka mid ah xalinta dhibaatooyinka algebra, xirfadaha nidaamka, falanqaynta xogta, dareen tirada iyo xirfadaha sababaynta.
xirfadaha hadlaya loola jeedaa awoodda aad u fahamto macluumaadka idinka soo hor jeedda oo ka jawaabaan su'aalo ku saabsan. Inta badan imtixaanka u isticmaali doonaa oo kaliya xirfadaha xisaabta aasaasiga ah iyo xirfadaha sababaynta. Mowduucyada badan oo horumarsan lagu dabooli doono su'aalo dhawr ah oo ka mid ah imtixaanka oo dhan.
Imtixaanka xisaabta GED® waa 115 daqiiqo dheer oo uu leeyahay laba qaybood:
Part 1 (5-7 su'aalaha imtixaanka ugu horeysay) - calculator ah lama oggola
Part 2 (su'aalaha imtixaanka haray - oo ku saabsan 40) - calculator ah loo ogol yahay
Ardaydu waa inay soo gudbiyaan jawaabaha ay u su'aalaha ugu horeysay (calculator lama ogola) ka hor inta uusan u dhaqaaqin inta kale ee imtixaanka. Waxaad baran kartaa badan oo ku saabsan Imtixaanka xisaabta.
Daawo video ah oo ku saabsan sida loo isticmaalo screen on-calculator imtixaanka GED® ah
Waa maxay on imtixaanka GED® ah: Science
imtixaanka sayniska GED® The cabiraya fahamkaaga of qaar ka mid ah fikradaha sayniska aasaasiga ah. Baaritaanku wuxuu diiradda saari doonaan meelaha qaar ka mid ah sayniska: sayniska nolosha, sayniska jirka, iyo dhulka iyo meel sayniska. Waxaa kaloo imtixaanka aqoonta sida saynisyahano horumarinta fikradaha (hab cilmiyaysan).
imtixaanka sayniska GED® soconaysaa 90 daqiiqo. Waxeey heesataa 34 in 45 su'aalo la isticmaalayo dhawr nooc oo kala duwan oo su'aal, oo ay ku jiraan doorashada badan, jiididda iyo dhibic, kaalinta kulul, iyo buuxi-in-the-bannaan. Su'aalo badan ku weydiin doonaa inaad u akhri qoraalka fudud cilmiyaysan oo ka jawaabaan su'aalo. Waxa kale oo aad ka filan kartaa in aad aragto badan oo miisaska iyo gooldhalinta iyo in ay ka jawaabaan su'aalo ayaga ku saabsan. Waxaad isticmaali kartaa calculator ah qaar ka mid ah su'aalaha haddii aad rabto in aad. Waxaad baran kartaa badan oo ku saabsan imtixaanka sayniska.
Waxaan qabaa su'aalo ku saabsan sida loo qaato imtixaanka GED® ee aan gobolka.
Waad awoodaa aad u ogaato sida loo qaato imtixaanka GED® ah ee gobolka.